HomeAfaan OromooTooftaa Nyaatame Afarsuun Bu’aa Hin Qabu
Bara dhufaa darban yaroo biyya keessaa didaan itti jabaatu Mootni Habashaa diina alaa uummatanii irrati duula sobaa banuun tooftaa ittiin didaa isaa keessa cabasan akka tahe beekamaa dha. Hojiin Habashoota fi nafxaynootaa dibbee tumuu, fakkaruu, geeraruu fi dhaadachuu duwwaa dha. Waraana irraa achi duuba fagoo dhaabatanii gara fuulaa duraa jedhanii ajaja laachuuf kan isaan qixxaatu hin jiru. Dura bu’anii lolanii loshiiuuf immoo onnee fi kennaa isaa hin qaban. Hojiin isaanii afshaalummaa qofa.
Bara baraan waraana isaan qopheessan irratti kan dura darbee dhumaa jiru ilmaan cunqorsamaa uummatoota mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraanii akka tahe walii himuu hin barbaachisu. Isaan garuu “dhakaa tokkoon sinbira lama ajjeessuu” jedhanii nutti kolfu. Diinnoni isaanii yaroo wal fixu gammachuun taa’anii ilaalu.
Tooftaa isaanii dhuloomtee kana har’a illee kunoo as baasanii ittiin nu gowwomsuuf yaalaa jiru. “. “Waamich Biyyaa Haadhaa”. “waan Hunduu Gara Waraanaa”,”Tokko Taanee Diina Alaa Kana Waliin Injifachuu Qabna” dhaadannoon jedhan kun dhaloota bara Kononel Mengistuu fi Malasaa turan gura irraa bilbila. Tooftaan duloomee du’e kana boolaa keessaa baasanii afarsuun gatii hin qabu. Diinni biyya Impaayeera Itoophiyyaa inni dura sirna nafxanyootaa kana. Yoo sirni kun biyya kana keessa buqqa’ee hin banne uummatani Impaayeera Itoophiyyaa keessa jiraatu bara baraan gadadoo, beelaa fi hiyumaaf saaxilamee akka boo’e jiraata.
Namicha janjahaa j. Birahaanuu Juulaa Jedhanii fi Kononeel Abiyiif dhaamsan qaba. Uummata Orommo irraa komandi postii dhaabdanii mana gubaa, mana wajjiin gubaa, gudeedaa, hidhaa, ajjeessaa, saamaa fi qabeenya isaa mancaasaa akka isiin wajjin biyya Misiraa lolu yoo yaadu tahe dhaqaa hudduu keessan dhungadhaa(kiss your ass). Ummatni Oromoo uummata qara, dhugaa jaalatuu fi dhugaaf dhaabbatu. Nagaa buusuuf jecha utuu arguu akka nama hin agarree kan gama ilaalu. Uummata nagaa uumuuf jecha natti haa hafu dursuu kana argatanii bara baraan Nafxanyoonni Uummata Oromoo akka gowwaatti fudhatanii itti roorisaa jiru.
Kononeel Abiyi akeeka akkaakayuu Minilki bakkaan nan gaha jette waadaa seente akka hubannaa koo yoo tahe geese jirti. Waan sitti hafe yoo jiraate uummatoota Kibaa amma akaakayuu waan fixxe hin se’u. Kan Oromoo waan Minilki godhe caalaa waan fixxee jirtuuf gammadi. Minilki meeshaa waraana argachuuf Eritrea Itaaliyaatti gurgurate. Atis Tigrayiin gargaarsa Isiyaas Afeworqii argachuuf jette gurguratee jirta. Miniliki bara 1902 Ingilizii irraa meeshaa argachuu Bishaan Abayyaa Misira itti guguratee jira. Atis IMF irraa Billiyoona torba fudhachuu Bishaan Abbayaa gurgartee jirta. Ammaa yaroo dubbiin karaa irraa kaatu as deebitee waakkachuun gatii hin qabu.
Mee akka siyaasaa keessanii itti baandaa jechuun maal jechuu dha? Akka naafu galuu yoo tahe nama dantaa biyyaa isaa ormaaf dabrsee laatu jechuu natti fakkaata. Yoo akksi hin taane nama naaf qajeelchun barbaada. Yoo hiikaan isaa akkana tahe bandaan inni duraa Minilki akka tahe ragaan guddaan lamaan olitti kaase ni gaha. Minilkii fi Yohaanis Oromoo Walloo waliin cabsuuf walii galanii yaroo Yohaanis Matamaa Irraatti warra Darbushi wajjin lola seene gargaruu dide. Warri Darbushii Yohanis injifatanii morma irraa kutatan. Minilki warra Darbushi wajjinsi wal lollee lafa isaan qabatan irraa deebisuu hin barbaanne. Meeshaa waraana tuulateen Uummata Oromoo fi Uummata Kibaa fixxuu fi saamuu irratti xiyyeefate.
Bandaa guddaa inni lammaffaa Kononeel Abiyi tahuu isaa ti. Gargaarsa Isiyaas Afeworqii argachuuf jecha Tigrayi dabrsee late. Bilxignaa Billiyoona torbaan badhaasuuf jedhee Bishaan Abbayyaa dabrsee Misiraa late. Hojii nafxanyootaa fi Habashaa yaroo hundaa hojii sobaa, fokkisaa fi yakkamaa dha. Bara TPLF biyya bulchaa turte hidhaan Abbayaa kan Wayyaanee itti jedhanii olola oofu. Dr. Birhanu nagaa walakkaa milliyoonaa Misiraa irraa fudhatee ESAT waan jedhamu ijaarate. Warri ESAT kun horii Misiraan dhaabbatanii har’a nama hundaa baandaa jedhanii yaroo abaranii fi arbasan dhaga’uun baayyee gurra nama dhukkubsa. Akka isaan yaadan itti waan isaan jedhanii fi godhan malee biyya lafa kana irratti kan fudhatama qabu hin jiru. Warra kana wajjin amma yoom akka rakkanu anaaf naa hin galuu. Kaayyoo hin qaban. Dhaabbii hin qaban. Waan dubbatanii fi hojjetan wal faalla. Yaroo hundaa dhumni dubbii fedhii isaanii gutachuu dha.
Uummatni Oromoo waraana isaan dibbee tummaa jirtan kana akka isin wajjin dhaabbatee hin lollee amantaa koo ti. Uummatni Oromoo akka bishaanii fi galaa illee isinii kennu yoo barbaadan hatattamaan waan gochuu qabdan:
Haala duree tokko malee Komandi postii Oromiyaa keessaa buqqisaa.
Haala duree tokko malee waraana biyyaa Oromoo irra qubatee jiru baasaa.
Haala duree tokko malee Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran gad lakkisaa.
Balaa waraanni Uummata Oromoo irraan gaheef beenyaa baasaa.
Uummatni Oromoo hiree isaa murteefachuu mirgi isaa eegamuuf qaba.
Waan hundaa caalaa waan baayyee na gadisiisu kononeel Abiyi humna Uummata Oromoo isa akka sibiilaa jabbatu itti hirkachuu dhiisee humna nafxanyaa amma shonboqoo jabina hin qabnetti hirkachuun maaliif akka isa barbaachise dha. Kunoo har’an kana Uummata Oromoo bal’aa irraa qofa miti Oromoota OPDO keessa isa wajjin turani irraa illee adda isa baasanii jiru. Yaroof Masaraa Minilki itti gagabaa jiru keessa isaan wajjin iskistaa sirbaa jira.
Nafxanyoonii fi Diqaalonni Habashaa OPDO keessa jiru qofaatti isa baasanii akka isa doorsisaa jiran odduun bahaa jira.Nafxanyoonni akka isa tufatanii jiran kan agarsiisu muudama inni isaanii keennu iyyuu irraa fudhachuuf fedhii hin qaban. Utuu akka durii sana humna waraana yookan dhageetii qabatanii halkan tokkotti achi irraa isa darbu. Bakka isaa yaroof nama buusatanii akeeka sirni Minilki deebisaanii ijaaratan rakkoo tahaa jira. Kanaafuu ammaaf achi isa kaa’aanii hojii isaa itti darbanii hojjechaa jiru jedhama. Oromiyaa keessatti waraanni hammenya guddaa hojjechaa jiru Liyuu Polisii Amhaara uffata Polisii Oromiyaa uffatee akka tahe hin himama. Prezedantiin Naannoo Oromiyaa Obboo Shimalis Abdiisa jaakeetii Kononeel Abiyi baachuu irra darbee aangoo tokko illee hin qabu jedhama. Bilixignaa Oromiyaa keessatti warra aangoo murteessaa qaban Diqaalota Habashaa tahuun dhugaa dha.
Kanaafuu Uummatni Oromoo hiree isaa ofiin murteefachuuf harka wal qabatee alaa fi keessaa ka’uu malee filmaata biraa hin qabu. Utuu waa’ee hammenya uummata keenya irra har’a gahaa jiru teenyee waakkannuu kan caaluu akka itti dhufaa jiru dagachuu taha. Qarree fi Qeerroon WBO wajjiin hiriira galuun amma. Aarsaa barbaachisuu hundaa baafnee Uummata keenyaa fi Biyyaa keenya bilisoomsuuf dirqamni seenaa mataa tokko tokko keenya gubbaa jira.